အဝေရာ မီးပုံးပျံကွင်းကို တပ်ပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအား လုံးဝလက်မခံပါ
ပို့စ်တင်ချိန် - 1/30/2014 03:27:00 PM
မြန်မာပြည်မှာ တပ်ပိုင် ၊ တပ်မြေ ၊ တပ်နယ် ဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ အတော်ကို ကြီးမားနေပြီဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရတော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါပြီ ။ လူနေထူထပ်သိပ်သည်းလှတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ အလည်ခေါင်မှာ စိုက်ထူထားတဲ့ တပ်နယ် မကျူးကျော်ရ ဆိုတဲ့ အနီရောင် ဆိုင်းဘုတ် တွေဟာ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ရင်ထဲကို စို့နှက်ထားသလိုခံစားနေခဲ့ရပါတယ် ။ အရပ်ထဲရွာထဲ နာကျည်း ခံပြင်းလှစွာနဲ့ တပ်ပိုင်နေသမျှတော့ တိုင်ပတ်နေမှာပဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကလည်း နားနဲ့ မဆံ့ အောင်ကြားနေရပါတယ် ။ အခု လတ်တလောမှာပဲ ̏ တပ်ပိုင်လို့ တိုင်ပတ် ̋ရတဲ့ တောင်ကြီးမြို့က ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အကြောင်းတရားတစ်ခုကို တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ် ။
တောင်ကြီးမြို့က ရွှေဘုန်းပွင့် နဲ့ ရွှေမုဌော ဘုရားစေတီများ တည်ထားကိုးကွယ်ရာ တောင်ခြေနားမှာ အဝေရာဆိုတဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အဲဒီကွင်းဟာ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အမှတ်အသား လက္ခဏာ လို့ ဆိုရမဲ့ မီးပုံးပျံများ လွှတ်တင်တဲ့ ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက် မီးပုံးကွင်းလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ် ။ ယခင်မီးပုံးပျံ လွှတ်တင်တဲ့ ကွင်းဟောင်းက ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ကြက်ဆူပင်တွေစိုက်ပစ်လိုက်တာကြောင့် ဒီနေရာကို ရွှေ့ပြောင်းပြီး မီးပုံးပျံလွှတ်တင်ရတာဖြစ်ကြောင်းလဲ မြို့ခံလူများဆီက မေးမြန်းသိရှိခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီကွင်းဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြို့ခံလူများရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရာပွဲဖြစ်တာကြောင့် မြို့ခံများအနေနဲ့လည်း အများပြည်သူပိုင် ကွင်း လို့ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူထားဖို့ သတိမမူမိခဲ့ကြဟန်တူပါရဲ့ ။
အခုတော့ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ အဲဒီ အဝေရာ မီးပုံးပျံကွင်းဟာ တောင်ကြီးမြို့သူမြို့သားတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်ကနေ ပိုင်ရှင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် အစမှာပဲ တောင်ကြီး အဝေရာကွင်း မှာ ဟောပြောခွင့်မပြုဖူး ၊ အကြောင်းကတော့ အဲဒီကွင်းဟာ တပ်ပိုင်ဖြစ်လို့ ဆိုပြီး အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ ရွာငံနဲ့ ညောင်ရွှေက သူငယ်ချင်းတွေက ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားကြပါတယ် ။ အကို လိုက်လာခဲ့ပါ ၊ ဒီကိစ္စကို ကျနော်တို့ ရေဆုံးရေဖြားဖြေရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြားချက်ကြောင့် ၂၄ ရက်နေ့ မနက် ၃း၀၀ နာ၇ီမှာ ရန်ကုန်ကနေ ဟဲဟိုးကို ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဟဲဟိုးအရောက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေက လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ဒါဟာ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒီကိစ္စကို ဒေသခံလူငယ်တွေအနေနဲ့ အရေးယူဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ၊ အခုလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း မခံနိုင်မရပ်နိုင်လာရောက်ပြောဆိုကြပါတယ် ။
စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဘာပြောမလဲဆိုတာ နားထောင်မယ် ၊ ဒီရက်ထဲမှာ အခြေအနေ တစ်ခုခုပြောင်းလဲနိုင်သလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြမယ် ။ အကယ်၍ ဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို ဆက်လုပ်ကြရ တာ ပေါ့ လို့ ပြောဆိုပြီး တောင်ကြီးကိုဆက်တက်ခဲ့ပါတယ် ။
တောင်ကြီးရောက်တော့လည်း မိတ်ဆွေ သူငယ် ချင်းတွေက နေ့ခင်းကြောင်တောင် အနုကြမ်းစီးခံလိုက်ရသလိုမျိုး ဖြစ်ရတာကို မခံမရပ်နိုင်ပြောကြ ဆိုကြပြန် ပါတယ် ။ ဒီမှာလည်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ၊ ဒီအခြေအနေအတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် ဒေသ မှာ ကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းကြရမှာပေါ့ လို့ ပြောပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတိုင်း နမ်ဆန်၊ မိုးနဲ နဲ့ လင်းခေးကို လိုက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အခြေအနေကို အမြဲဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဖို့လည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ် ။
နောက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိုးနဲမှာ မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်မှာပဲ ဖုန်းသတင်းဝင်လာပါတယ် ။ အခြေအနေက မပြောင်းလဲပါဖူး ၊ တောင်ကြီးမြို့က ပြည်သူတွေရဲ့ အများပိုင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ အပြင် လွတ်လပ် ရေးနေ့ ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့စတဲ့ အခမ်းအနားများကို ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ ပြည်နယ်ပိုင်ကွင်းတစ်ခုဟာ ဘယ်သော ဘယ်အချိန်ကများ အရှင်ရယ်တဲ့မှ လတ်လတ် တပ်ပိုင်ကွင်းဖြစ်မှန်းမသိဖြစ် သွားတာသေချာသွား ပါပြီ ။ အဲဒီ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခြေခံဥပဒေ ရှင်းလင်း ဟောပြောပွဲကို ခွင့်မပြုဖူး ဆိုတာက သေချာသွားပါပြီ ။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမလဲ လို့ မေးကြည့်မိတော့ လူငယ်တွေက ကျနော်တို့က တော့ လက်မခံဖူး အကို ၊ နမ်းဆန်တို့ ၊ မိုးနဲတို့ ၊ လင်းခေးတို့မှာတောင် အမေစု ဟောပြောပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ၊ ကျနော်တို့ ပြည်နေယ်မြို့တော် ကျကာမှ ခွင့်ပြုချက်မရလို့ မလုပ်ရဖူး ဆိုရင် တောင်ကြီးသားတွေ ရာဇ၀င်ရိုင်းလိမ့်မယ် ။ တောင်ကြီးသမိုင်း မရိုင်းစေရဖူးဗျ လို့ ပြောကြပါတယ် ။ အေးအဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ အဲဒီကွင်းဘေးက နေရာမှာ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ။ တက္ကသိုလ် နောက်ဘက်ကပ်လျက်မှာ လုပ်မယ် ။ လူတွေကို စုစည်းထားပြီး အမေ့ကိုစောင့်မယ် အမေခဏလေးဖြစ်ဖြစ် စကားလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းဖြစ်ဖြစ် ပြောသွားရင် ၊ ပြောသွားရတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကျေနပ်တယ် ။ အကယ်၍ အမေစုက ရအောင်ဟောပြောမယ်ဆိုရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားဦးမှပေါ့ လို့ ဖုန်းနဲ့ပဲ စကားပြောရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရပါတယ် ။ ၁၀ ဘီးကားကို ငှားပြီး ရွေ့လျား စကားပြောစင်မြင့် mobile stage လုပ်ကြတော့မယ် ။ အဲဒီကွင်းရှေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရောက်လာမဲ့အချိန်မှာ စင်မြင့်ကို မောင်းယူလာမယ် ။ ပြည်သူတွေက ကွင်းရှေ့လမ်းမှာထိုင်စောင့်ကြမယ် ၊ အဲဒီလို လုပ်ကြမယ်လို့ သတင်းပေးပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့စာရေးသူလည်း အားလုံးညှိနိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ဆက်လုပ်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် ။
၂၆ ရက်နေ့မနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာတော့ တောင်ကြီးကဖုန်းမြည်လာပါတော့တယ် ။ မနက်ပိုင်း ကတည်းက ကွင်းထဲမှာ လူတွေစတင်ရောက်ရှိလာပြီး စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ် တဲ့ ။ မြို့ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကွက်လပ်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသော်လည်း ၊ အဲဒီနေရာက အလွန်ကျဉ်းမြောင်းလို့ မူလအတိုင်း ပဲ ကျောက်တစ်လုံးလမ်း ပေါ်မှာပဲ လူတွေစုဝေးနေပါပြီတဲ့ ။ အခု ဆယ်ဘီးကားကြီးတစ်စီးကို ငှားရမ်းပြီး ကား ပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောစင်အဖြစ် ( Mobile stage ) ကိုလည်း အဆင်သင့်ပြု လုပ် ထားပြီးပါပြီတဲ့ ။ ပွဲကတော့လှပြီပဲ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မနက် ၇း၀၀ နာရီကတည်းက လင်းခေးက ထွက်ခွာပါတယ် ။ လမ်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ ၀င်ရောက်ကန်တော့တာကလွဲလို့ တစ်လမ်းလုံးဘယ်နေရာမှာမှ မရပ်တော့ပါဖူး ။ တောင်ကြီးကို ၃း၀၀ နာရီအရောက်သွားမယ်လို့ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများဆီက သတင်းရပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ တောင်ကြီးက သူငယ်ချင်းများဆီကလည်း ဖုန်းက အဆက်မပြတ်ဝင်လာနေပါတယ် ။ စင်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ ၊ လူ နှစ်ထောင် ကျော် လောက် ရောက်နေပြီ ။ အာဏာပိုင်တွေလည်းရောက်လာတယ် ။ အနှောက်အယှက်တော့ မပေးဖူး ၊ လာပြီး စောင့်ကြည့် နေတဲ့ သဘောပါပဲ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက အချိန်မဲ့ အမျှရောက်နေပါတယ် ။ တောင်ဆင်းတောင်တက်တွေမှာ အရှိန်ကိုထိန်းမောင်းနေရတဲ့ ကားကို စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပဲ ဆင်းပြေးလိုက်ချင် စိတ်တောင်ပေါက်လာပါတယ် ။ ဘေးကနေ ဘာထူးသေးလဲ ကိုထင်လင်းလို့ ခဏခဏမေးတဲ့ အဘ ဦးကျော်ခင်နဲ့ အကျိုး အကြောင်း ပြောလိုက် ၊ တောင်ကြီးမြို့ဖက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း ကားမောင်းသမားကို ဘယ်လောက် လိုသေးလဲ ၊ ဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲ နဲ့ပဲ မကြာခဏမေးနေမိပါတော့တယ် ။
ဟိုပုန်းမြို့က အထွက်မှာတော့ အကြိုထောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါပြီ ။ ၁၁၇ မိုင် အရောက်မှာတော့ တစ်သီတစ်တန်းကြီးလာရောက်ကြိုဆိုနေကြတဲ့ ကားတန်းက မျက်စေ့တစ်ဆုံးပါပဲ ။ တက္ကသိုလ်အနောက်ဖက် အဝေရာကွင်းဘေးက ကျောက်တစ်လုံး ကားလမ်းမပေါ်မှာ လူတွေ ၊ ကားတွေ ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်ပိတ်သွားပါပြီ လို့သတင်းပေးကြပါတယ် ။ တောင်ကြီးမြို့ခံပြည်သူတွေသာမက အနီး အပါးမြို့နယ်များကပါ တက်ရောက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ အစကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုမြင်တွေ့ပြီး ဟောပြောတာကိုနားထောင်ချင်လို့ လာကြတာဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ ကိုယ့်မြို့သူမြို့သားတွေပိုင် တဲ့ကွင်းကို တပ်ပိုင်ကွင်းလို့ အပိုင်စီးခံရတာရယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို ဒီကွင်းမှာ လုပ်ခွင့် မပြုတာရယ်ကြောင့် ခံပြင်းဒေါသဖြစ်နေကြပြီး မရောက်အရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ် ။
ကွင်းစပ်ကိုအရောက်မှာတော့ မဲခဲနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ရဲရဲနီနေတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေကို ဝေ့ယမ်းလို့ ကြိုဆိုနေကြပါပြီ အမေစုကျန်းမာပါစေဆိုတဲ့ အသံက တောင်နံရံကိုပဲ့တင်ထပ်သွားစေပါတော့တယ် ။ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ လမ်းနဘေး တောင်ကမ္ဘားယံ ပေါ်မှာ ၊ ကျောက်တံတိုင်းပေါ်မှာ လူတွေက မျက်စေ့တစ်ဆုံး ၊ နောက်ဆုံးကို လှမ်းလို့တောင်မမြင်ရလောက်အောင် များပြားလှပါတယ် ။အဲဒီလူအုပ်ကြီးဆီက တစ်ခဲနက် အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေတဲ့ အသံတွေက ကျနော်တို့ အနိုင်ကျင့်ခံရပါတယ် အမေလို့ ရင်နာနာနဲ့ အော်ဟစ်တိုင်တန်း နေကြသလိုပါပဲ ။ မခံမရပ်နိုင်စွာ အော်ဟစ် ကြွေးကြော်နေတဲ့ အသံများဟာ ကျနော်တို့မှာ အမေက လွဲလို့ အားကိုးစရာ မရှိတော့ပါဖူး လို့ တိုင်တည်နေကြ သလိုပါပဲ ။ ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ဆိုင်းဘုတ် စာတမ်း တစ်ခုမှာဆိုရင် အဝေရာကွင်းကို တပ်ပိုင်ကွင်းအဖြစ် .. လုံးဝ လက်မခံဖူး ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောပွဲကတော့ တောင်ကြီးမြို့သူမြို့သားများရဲ့ အဖိမခံ ၊ အထိမခံ စိတ်တို့နဲ့ တစ်ခဲနက်တက်ရောက်အားပေးမှုမှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူအကြား ထိပ်တိုက်တွေ့အောင် ကျမတို့က လိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဖူး ၊ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကြားမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့အောင်လုပ်ထားတာက အခု ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် ကျမတို့က နေရာအနှံ့လိုက်ပြောနေရတာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ပြည်သူတွေရင်ထဲ စွဲညိသွားခဲ့သလို ၊ ̏ဒီဥပဒေကို အခု ရောက်လာတဲ့ ပြည်သူတွေထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်များ အစအဆုံးဖတ်ဖူးလဲ ၊ ဖတ်ဖူးရင်လက်ထောင်ပြစမ်းပါ ̋̋ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က မေးမြန်းတဲ့အခါ မဖတ်ဖူးပါဖူး အမေ ဆိုတဲ့ အသံကြီး က ဟိန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ ̏ ပြည်သူတွေက ဖတ်တောင်မဖတ်ဖူးပါဖူး ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ကျော်နဲ့ အောင်မြင်စွာ အတည်ပြုခဲ့တာလဲ ̋̋ လို့ မေးမြန်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်အရာက အလိမ် ဘယ်အရာက အမှန်တရားဆိုတာ ရှင်းလင်းသွားခဲ့တော့တာပါပဲ ။
တောင်ကြီးမြို့ လူထုဟောပြောပွဲကတော့ မတရားမှုကို တရားမှုက အောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ။လူထု ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကြီး ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပိတ်လား ဆို့လား ၊ တားမြစ်လား လုပ်လာလိုက်တာ တောင်ကြီးလူထုနဲ့ အတွေ့မှာတော့ တိုင်ပတ်သွားပါတော့တယ် ။ ပြည်သူ တွေက လက်မခံဖူးလို့ တညီတညွတ်ထဲဆိုလာကြရင် အမိန့်အာဏာဆိုတာ အငွေ့ပျံသွားရမယ် ဆိုတာကို တောင်ကြီးမြို့ နယ် လူထုက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို လှုပ်နှိုးသတိပေး တပ်လှန့်လိုက်ပါပြီ ။ ဒီပွဲအပြီးမှာတော့ အများပြည်သူပိုင်ကွင်း ( ပြည်နယ်လူထုပိုင်ကွင်း)ကို တပ်ပိုင်မြေ လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ အတော်ကိုရှင်းကြ လင်းကြရတော့မှာ ၊ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် တိုင်ပတ်တော့မှာပါ ။ တစ်မိုးလုံးဖျောက်ဆိပ်ဆိုတဲ စကားတောင် မှေးမှိန် သိမ်ငယ်သွား အောင် လက်ညှိုးညွှန်သမျှ မလွဲတော့တဲ့ပြည်နိုင်ငံတစ်ဝှန်းလုံး တပ်ပိုင်မြေတွေကြောင့် တိုင်ပတ် နေရတဲ့ ကိစ္စ တွေကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြသင့်ပါပြီလို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် လိုက်ပါ တယ်ဗျာ ။
၂၆ ရက်နေ့ တောင်ကြီးကို ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း မှာချက်ခြင်းရေး ချက်ခြင်းပို့ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ပါ
ဒီနေ့ ၂၉ . ၁ . ၂၀၁၄ ထုတ် The Chancellor ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။